Teknolojia goavambe sy angona lehibe: Inona no tokony hotandremana amin'ny fikarohana eny an-tsena amin'ny 2020 | Martech Zone
Teknolojia goavambe sy angona lehibe: Inona no tokony hotandremana amin'ny fikarohana eny amin'ny tsena amin'ny taona 2020
Alatsinainy Martsa 2, 2020 Alatsinainy Martsa 2, 2020 Sudip Saha
Izay efa toy ny taloha dia efa tonga ankehitriny: ny taona 2020 dia tonga amintsika ihany. Ny mpanoratra tantara foronina siansa, mpahay siansa malaza ary mpanao politika dia efa naminany mialoha ny ho endrik'izao tontolo izao ary, na dia mbola tsy manana fiara manidina, zanatany any Mars, na làlambe aza isika, dia tena mahavariana tokoa ny fandrosoana ara-teknolojia ankehitriny - ary tsy hisy afa-tsy manitatra hatrany.
Raha ny fikarohana momba ny tsena, ny fanavaozana ara-teknolojika ny folo taona vaovao dia mitondra fanamby izay mila resena hahazoana fahombiazana maharitra. Ireto ny sasany amin'ireo olana misongadina indrindra izay mila jerena amin'ny fikarohana momba ny tsena amin'ny taona 2020 sy ny fomba tokony hanatonan'ireo orinasa azy ireo.
Fiaraha-miaina maharitra miaraka amin'i AI
Ny fironana lehibe indrindra amin'ny folo taona ho avy dia ny firoboroboan'ny fahalasan-tsaina artifisialy amin'ny indostria rehetra. Raha ny marina, ny fandaniana tanteraka amin'ny rafitra AI sy kognitika dia antenaina hihoatra ny $ 52 miliara amin'ny 2021, miaraka amin'ny fanadihadiana natao vao haingana fa 80% amin'ireo mpikaroka eny an-tsena dia mino fa hisy fiatraikany tsara eo amin'ny tsena ny AI.
Na dia toa manondro fananganana birao tarihin'ny milina aza ity dia mbola lavitra ny lalana alohan'ny ahafahan'ny masinina mifehy ny toeram-piasana - be dia be ny zavatra any izay mbola tsy azon'i AI atao.
Eo amin'ny sehatry ny fikarohana eny an-tsena dia ilaina ny fampifangaroana fitaovana fikarohana mahazatra sy mifototra amin'ny AI mba hahomby indrindra. Ny antony ao ambadik'izany dia, na dia nahagaga aza ny fandrosoana tamin'ny teknolojia AI, dia mbola tsy afaka mamerina ny fahalalan'olombelona na manome fomba fijery lalina momba ireo lafin-javatra ivelany misy ny indostria iray nomena.
In tsena fikarohana, AI dia ampiasaina tsara indrindra hanatanterahana asa ambany indrindra izay mampifamatotra ny fotoanan'ny mpikaroka - zavatra toa ny fitadiavana santionany, ny fanodinana ny fanadihadiana, ny fanadiovana ny angon-drakitra, ary ny fandalinana ny angon-drakitra, ny fanafahana ny olombelona hampiasa ny sainy mpandinika ho an'ny asa sarotra kokoa. Avy eo ny mpikaroka dia afaka manokana tanteraka ny ankamaroan'ny fahalalany midadasika mba handikana ny fironana sy hanome fomba fijery - maro amin'izy ireo no angonina amin'ny alàlan'ny fitaovana mandeha ho azy.
Raha fintinina, ny teknolojia AI dia afaka mahita data marobe ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, tsy ny angon-drakitra mety foana izany - ary eto no idiran'ny sain'olombelona mba hahitana ny angon-drakitra mifandraika indrindra ampiasaina amin'ny fikarohana eny an-tsena. Ny fampiasana ny tanjaky ny AI sy ny faharanitan-tsoratry ny asa aman-draharaha ataon'ny olombelona amin'ny singa voajanahariny dia manome ny hetsiky ny orinasa fa tsy azony raha tsy izany.
Data fiarovana sy mangarahara amin'ny vanim-potoana niomerika
Miaraka amina raharaha ratsy momba ny tsiambaratelo vaovao toa isan-taona, ny fiarovana ny angon-drakitra ary ny fitomboan'ny fitantanan-draharaha dia olana goavana amin'ny ankamaroan'ny indostria rehetra mifandraika amin'ny angona mpanjifa. Ny tsy fahatokisan'ny besinimaro ny fanomezana ny angon-drakitra ataon'izy ireo dia lohahevitra mafana iray mila dinihin'ireo orinasam-pikarohana rehetra momba ny tsena ankehitriny sy amin'ny ho avy.
Zava-dehibe tokoa izany amin'ny taona ho avy. 2020 dia hitondra hetsika lehibe roa manerantany ihany koa izay mety ho feno fanentanana tsy fampahalalana avy amin'ny antoko fahatelo: Brexit sy ny fifidianana any Etazonia. Ny mangarahara avy amin'ny indostrian'ny fikarohana eny an-tsena dia ho fanalahidy: ny orinasa dia tokony hampiseho an'izao tontolo izao fa ny fahitana azony dia ho hery tsara hanatsarana ny fiainan'ny olona fa tsy hampiasaina hampielezana hevitra. Ka ahoana no ahafahan'ny orinasa mampifanaraka sy mamerina izany fahatokisana izany amin'ny toetr'andro ankehitriny?
Mba hanatonana io adihevitra etika io dia tokony hanararaotra mamorona kaody amin'ny fampiasana etika ny angona ireo orinasan-fikarohana. Na dia nitana torolàlana sasany aza ireo orinasam-pandraharahana fikarohana toy ny ESOMAR sy MRS ho an'ireo orinasam-pikarohana momba ny tsena hanaraka izany rehefa hiresaka ireo olana ireo, dia mila dinihina lalina kokoa ny etika rehefa manao fikarohana.
Ny valin-kafatra dia loharanon'aina amin'ny fikarohana eny an-tsena, izay mazàna amin'ny endrika fanadihadiana izay ampiasaina hanatsarana ny vokatra, ny fifandraisan'ny mpanjifa na ny mpiasa, na fampiasana maro hafa. Ny zavatra ataon'ireo orinasa amin'ny angon-drakitra azo tamin'ity fikarohana ity - ary ny tena zava-dehibe, ny fomba ampitan'izy ireo an'izay nalaina ny data - dia ilaina amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny ho avy.
Raha miresaka momba ny fiainana manokana momba ny angon-drakitra, ny blockchain dia mety ho valiny hiantohana ny mpanjifa fa voatazona am-pilaminana sy mangarahara ny data. Blockchain dia efa nalaza ho iray amin'ireo teknolojia manavao indrindra tamin'ny taonjato faha-21 ary, amin'ny taona 2020, hitombo ny lanjan'ny blockchain satria manomboka manantona azy amin'ny rafitra fiarovana azy ireo ny indostria vaovao. Miaraka amin'ny sakana, ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa dia azo angonina am-pilaminana sy mangarahara amin'ny alàlan'ny orinasam-pikarohana eny an-tsena, mampitombo ny fitokisana nefa tsy mampihena ny fahombiazan'ny data.
Ho avy mamiratra amin'ny fanangonana angon-drakitra 5G
Tonga ihany ny 5G, miaraka amin'ireo orinasam-pifandraisan-davitra manohy mamoaka ny fahazoana miditra amin'ireo tanàna manerana an'izao tontolo izao. Na dia mila fotoana kely aza ny fanandramana ny tombony tena lehibe indrindra, fiara tsy misy mpamily, filalaovana VR tsy misy tariby, robot fanaraha-maso lavitra, ary tanàna marani-tsaina dia ampahany amin'ny ho avy tsy mampino izay hotarihin'ny teknolojia 5G. Vokatr'izany, ny orinasan-fikarohana amin'ny tsena dia mila mianatra ny fomba fampiharana teknolojia tsy misy tariby 5G amin'ny paikadiny fanangonana data.
Ny fifandraisana miharihary indrindra amin'ny fikarohana eny an-tsena dia ny fampitomboana ny isan'ny fanadihadiana vita amin'ny alàlan'ny finday. Satria ny mpanjifa dia afaka miaina hafainganam-pandeha avo lenta kokoa amin'ny findainy, dia azo inoana kokoa fa miditra amin'ny fanadihadiana amin'ny finday izy ireo. Saingy amin'ny fitomboan'ny fampiasana fitaovana marani-tsaina amin'ny fiara, fitaovana ao an-trano, rafitra ao an-trano ary orinasa, dia nitombo be ny haben'ny fanangonana angon-drakitra. Mila manararaotra an'izany ny fikarohana eny an-tsena.
Manomboka amin'ny fanavaozana ny teknolojia ka hatramin'ny fanovana ny fomba fandraisan'ny mpanjifa ny angon-drakitra, ny 2020 dia hitondra fiovana marobe tokony harahin'ireo orinasan-fikarohana amin'ny tsena. Amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fandrosoana ara-teknolojia amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny paikadin'izy ireo, ny fikarohana ny tsena dia ho voaomana tsara hahomby ankehitriny sy mandritra ny folo taona.
Tags: 5gfahaizana artifisialylalànamangarahara
Sudip Saha, COO an'ny Fijerena ny tsena amin'ny ho avy, orinasa mpikaroka sy mpanadihady eo an-tsena nahazo loka. Mpandraharaha matihanina amin'ny fitomboana manana traikefa lehibe amin'ny fikarohana tsena sy ny fitantanana ny tetikasa manerana ny marindrano ao amin'ny APAC, EMEA, ary Amerika, Sudip dia mpino matanjaka sy mpanohana ny vahaolana miorina amin'ny fanavaozana, miaraka amin'ny fanamafisana ny famoronana vahaolana namboarina hamaly ny filan'ny mpanjifa isan-karazany. .
GetEmails: Fantaro hatramin'ny 35% ny fifamoivoizana an-tranonkala tsy fantatra anarana ary hitombo ny lisitry ny mailakao
Sehatra fifampiraharahana ara-tsosialy 30 an'ny orinasa